Iinkampani zefanitshala Ukuthengisa kunye nokuhlawulwa eUnited States
Iinkampani zefanitshala ngaphakathi North Hollywood
Iinkampani zefanitshala ngaphakathi California
Ipapashwe ngu Modern Bathroom
umbono Iinkampani zefanitshala ipapashiwe 7 months ago
Ifenitshala ibhekisa kwizinto ezinokususwa ezenzelwe ukuxhasa imisebenzi eyahlukeneyo yabantu njengokuhlala (umzekelo, izitulo, izitulo, kunye nesofa), ukutya (iitafile) kunye nokulala (umzekelo, iibhedi). Ifenitshala iphinda isetyenziselwe ukubamba izinto kwindawo efanelekileyo yokusebenza (njengendawo ethe tyaba ngaphezulu komhlaba, njengeetafile kunye needesika), okanye ukugcina izinto (umzekelo, iikhabhathi zekhabhathi kunye neishelufu). Ifenitshala ingaba yimveliso yoyilo kwaye ithathwa njengendlela yobugcisa bokuhombisa. Ukongeza kwindima yokusebenza kwefanitshala, inokusebenzela injongo yokomfuziselo okanye yenkolo. Ingenziwa kwizinto ezininzi, kubandakanya isinyithi, ipulasitiki kunye neenkuni. Ifenitshala inokwenziwa kusetyenziswa iindibaniselwano zomsebenzi wokhuni ezibonisa inkcubeko yalapha.